Halkani waxaad kaga bogan kartaa wararka caalamka.
Madaxweynihii hore ee Suudaan Al-Bashiir oo Xukun adeg lagu riday
Guddoomiyaha Nairobi oo Maanta Maxkamad la horgeeyay
Aqalka Wakiilada Mareykanka oo meel mariyay sharci taageeraya muslimiinta ….
Banaanbaxyo Gil-gilay Valetta & Ra’iiusl Wasaare Caan ah oo laga….
Al-Sisi oo War kasoo saaray heshiiskii Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta
Maxay ka tiri Jaamacadda Carabta heshiiska Somalia iyo Kenya?
Itoobiya oo fasaxday shirkadaha gaarka loo leeyahay ee baabuurta.
Duqeyn lagu dilay dad Rayid ah iyo Sarkaal halis oo la fuliyay
Madaxweyne Dunida Caan ka ah oo Xabsiga laga sii daayay
Haweeney Sir badan ka heysa Al-Baqdaadi oo gacanta lagu dhigay
Afgambi lala damacsanaa Madaxweyne Caan ah oo fashilmay iyo Mareykanka…
Daacish oo Goordhow ku dhawaaqday shaqsigii bedeli lahaa Al-Baqdaadi
Cabdi Iley oo Maxkamad la soo taagay kuna dhawaaqay hadal Cajiib ah
Axmed Madoobe oo Guddiga diyaarinta Sharciga Doorashooyinka oo kulmay
DEG DEG:-Trump oo ku dhawaaqay inuu dhintay Hogaamiyihii Daacish